Daawo muuqaalka: Madaxweynaha somaliya oo ugu baaqay shacabka soomaaliyeed inay ka qeyb qaataan dib u buurka dhirta xili uu ka hadlaayey maalinta dhirta oo muqdisho lagu qabtay |
Daawo muuqaalka: Madaxweynaha somaliya oo ugu baaqay shacabka soomaaliyeed inay ka qeyb qaataan dib u buurka dhirta xili uu ka hadlaayey maalinta dhirta oo muqdisho lagu qabtay
Madaxweynaha Jamhuuriyada Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markale ku celiyey sida ay dowlada Soomaaliya u diidan tahay jarista dhirta dalka,madaxweynaha oo ka qaybgalyey xus loo sameeyey maaalinta dhir beeridda Soomaaliya oo lagu qabtay gudaha xarunta madaxtooyada qaranka ee Villa Soomaaliya.
Madaxweynaha oo war kooban ka sheegay munaasabadda ayaa ku sheegay in ay dambi ay tahay in la jaro dhirta isla markaane dibadda loo dhoofiyo. “Waxaa jira sharciya ay dowladda Soomaaliya kasoo saartay jaridda dhirta biloowgii 1970kii, Waxaa kale oo jira Qaraar ay soo saartay Qaramadda Midoobay oo ku aaddan dhuxusha iyo dhoofinteeda waa lama huraan in la dhaqan geliyo sharciyadaan” ayuu yiri Madaxweynaha dalka.
“Markale ayaan ku celinayaa dhoofinta dhuxusha waa danbi, Dhirteena waxaa ku xeran nolosheena, waa in aan hirgelino sharciyadda dalka iyo kuwa Caalamka si aan u badbaadno” ayuu mar kale yiri Madaxweyne Xasan.
Munaasabadda Xuska maalinta dhir beeridda Soomaaliya oo lagu qabtay madaxtooyada Soomaaliya ayaa waxaa ka qayb galay masuuliyiin ka socday qaramada midoobe,madaxweyne Xasan Sheekh ayaa intii munaasabdu ay socotay waxa uu beeray geed wuxuuna dhammaan shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay iney geedo ku beeraan guryahooda.
Halkaan hooseka daawowarbixintaani oo faahfaahsan.